सिंहदरबारको बालुवाटारको, खुल्लामञ्चको जग्गा अतिक्रमण
Topic: सिंहदरबारको बालुवाटारको, खुल्लामञ्चको जग्गा अतिक्रमण
Author Topic: सिंहदरबारको बालुवाटारको, खुल्लामञ्चको जग्गा अतिक्रमण (Read 1327 times)
२०७६ बैशाख १९ बिहीबार
तस्बिर : सतिश पोखरेल/ नयाँ पत्रिका
सिंहदरबारको वास्तविक पर्खाल
Re: सिंहदरबारको बालुवाटारको, खुल्लामञ्चको जग्गा अतिक्रमण
पूर्वसचिवले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले भूमाफिया ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारले निगरानीमा समेत राखेन
२०७६ बैशाख १८ बुधबार
शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको समूहले बालुवाटारको सरकारी जग्गा बेचेर कान्तिपथमा पुरानो दरबार किनेको खुलासा भएको छ । पहिले ब्रिटिस काउन्सिल र पछि मेगा बैंकको प्रधान कार्यालय रहेको सो भवन ५ रोपनी जग्गामा छ । काठमाडौंको मुटुमै रहेको सो क्षेत्रको जग्गाको औसत मूल्य नै आनाको डेढ करोड छ । त्यसैले अहिले बजारमूल्यअनुसार सो जग्गालाई एक अर्ब २० करोड पर्छ । यो समूहले सरकारी जग्गा बेचेर कमाएको पैसा यस्ता धेरै सम्पत्तिमा लगानी गरेको छ । तर, त्यसको अनुसन्धानमा सरकारले चासो दिएको छैन ।
यो धेरै डकुमेन्ट अध्ययन गर्नुपर्ने खालको अनुसन्धान छ । विभिन्न कागजपत्रको एकदमै डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कागजपत्रहरू मालपोत, गुठीलगायत विभिन्न निकायमा छन् । पत्राचार गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कागजपत्र आइसके । कतिपय आउन बाँकी छ । यो हाम्रो लागि पनि अनुसन्धानको नयाँ विषय हो, केस एकदमै जटिल छ । तत्कालीन अवस्थामा कुन कानुन थियो भनेर हेनुपर्छ । सजिलो अनुसन्धान होइन, गहिरोसम्म सबै कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले यसमा समय लागेको हो । अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्ने तहमा पुगेका छैनौँ । सूचना मात्र संकलन गरेका छौँ । जग्गाको हक कसरी हस्तान्तरण भए भन्ने कुरा विस्तृतमा थप निर्णय नहेरीकन को–को संलग्न भन्ने भन्न सकिन्न ।
१. बूढानीलकण्ठबाट लाजिम्पाट हुँदै आएको खोला उत्तरढोका र गैरीधाराको बीचबाट नारायणहिटीभित्र छिर्छ । २. नारायणहिटीभित्र पनि खोला साँघुरो छ, तर बगेको स्पष्ट देखिन्छ, जयनेपाल हलअगाडिको पर्खालसम्म खोला छ । ३. जयनेपाल हलबाट दक्षिणतर्फ कमलादी मोडसम्म खोलाको नामोनिसान छैन, खोला भूमिगत बनाएर भव्य भवन बनेका छन्
टुकुचा खोलाको जग्गा मिचिएको सूचना प्राप्त भएको छ । यसको विस्तृत विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । यस्ता जग्गा मिचिएको यो नै पहिलो होइन । अन्य ठाउँमा पनि छन् । सबै वडालाई मिचिएको जग्गाको पूर्ण विवरण पठाउन भनेका छौँ । विवरण संकलन हुँदै छ । कतिपय आई पनि सकेका छन् । मिचिएका जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव तयार हुँदै छ । यो प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेस हुन्छ । निर्णयपछि कडाइका साथ मिचिएका जग्गा फिर्ता अभियान सञ्चालन हुन्छ ।
tukuchha encroachment 2019-05-02.jpg (274.38 kB, 1700x811 - viewed 124 times.)
singhadarbar2019-05-02.jpg (1113.04 kB, 1700x811 - viewed 96 times.)